यसकारण प्रयोग गरौँ, लालीगुराँस ! « Salleri Khabar
यसकारण प्रयोग गरौँ, लालीगुराँस !
प्रकाशित मिति : 22 September, 2019
नेपालको राष्ट्रिय फुल भनेकै लाली गुराँस हो l जुन पहाडी भेगमा पाइने गुराँसको फुल हो । लाली गुराँस साधारण तया माघ, फागुन तिर फुलेको देखिन्छ। तर छिटो फुल्ने ठाउँमा यो फुल पौषको महिनामा पनि फुलेको देखिन्छ। यसको फुलको रङ्ग रातो हुनका साथै यसको आकार पनि ठुलो हुन्छ l यस फुललाई अधिकांश मानिसहरूले देखेता पनि यसको बारेमा भने थाहा नहुन सक्छ l लालीगुराँस हेर्दामा जति आकर्षित देखिन्छ, स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक साबित हुन्छ । तर, यस फुल के का लागी हुन् त फाइदाजनक? आउनुहोस् चर्चा गरौँ उक्त विषयबारे l
मिर्गौंला सम्बन्धी रोग नियन्त्रण गर्नः
यदि तपाईँ मिर्गौंला सम्बन्धी रोगी हुनु हुन्छ भने लालीगुराँसको जुसको सेवन गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । जसको सेवन नियमित गर्नाले मिर्गौंला सम्बन्धी रोग नियन्त्रण भई शरीरमा रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता समेत विकास गर्दछ ।
रगतको कमी हुन दिँदैनः
पहाडी भेगमा पाइने गुलाबी रङ्ग तथा सेतो रङ्गको लालीगुराँस औषधीय गुण हुन्छ । जसको सेवन गर्नाले शरीरमा कहिल्यै पनि रगतको कमी हुन् दिदैंन l
रक्तचाप कम गर्छः
यदि तपाईँ राष्ट्रिय फुल लालीगुराँसको जुस नियमित रूपमा सेवन गर्नु हुन्छ भने यसले रक्तचाप बढ्न दिँदैन । यसमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन बी हुने गर्दछ । जसले अनेकौँ रोगहरू जस्तै खोकी, ज्वरोलाई औषधीकै रूपमा काम गर्दछ ।
मुटु रोगीका लागि फाइदाः
यदि मुटु रोगबाट पीडित व्यक्तिले नियमित जसो एक गिलास लालीगुराँसको जुस पिउने हो भने शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न नदिई मुटु रोगसँग सम्बन्धित अन्य खतरा न्यून गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ l
लकडाउनको बढ्दो असर - बालबालिकामा डिप्रेसनको जोखिम उच्च